Zvinyorwa zveDissolution Zvinoshandiswa Kuputsa Kambani
Sangano kana LLC inofanirwa kufaira zvitupa kana zvinyorwa zvekuparadzwa nenyika kuitira kupedza kuvapo kwekambani. Makambani Akabatanidzwa anokubatsira mukufaira kwemapepa aya mune chero e50 matunhu uye dzimwe nzvimbo dzekunze.
Tengesa Kambani Yako / Kambani
Mune zvimwe zviitiko kuvapo kwesangano rako kunogona kushandiswa nevanhu vari kutsvaga kuisa kambani yakwegura. Makambani Akabatanidzwa anogona kutenga yako kambani kubva kwauri kuti inyorwe mune yedu yekare makambani dhairekitori. Taura nesu nhasi kuti tione kana iwe uchikodzera kuti rako bhizinesi ratengwa.